बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि सर्दीको लागि एक नेबुलाइजरसँग ईन्सेलेसन के गर्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि सर्दीको लागि एक नेबुलाइजरसँग ईन्सेलेसन के गर्ने?
यस उपकरणको सहायताले सम्पूर्ण परिवार सामान्य चिसोबाट छुटकारा पाउन सक्छ। हामी कुनै औषधि खरीद गर्दैनौं। र हामी खनिज पानी लिन्छौं, राम्रो, नार्जान ब्रान्डको, ताकि यो नुनको स्वाद लिन्छ। त्यस्ता पानीमा धेरै नुनहरू छन् भन्ने तथ्यले गर्दा, नाक म्यूकोसा शुद्ध छ। यो सास फेर्न सजिलो हुन्छ र सबै भाँडो बाहिर आउँछ। अनुप्रयोग सरल छ - पानीको एक थोरै पैसा डाल्नुहोस् र सास फेर्नुहोस्।
हामी साधारण नुन (सोडियम क्लोराइड) को साथ नेबुलाइजरमा इनहेलेसनहरू गर्छौं।
यदि बहेको नाक खोकीसँगै छ भने, थोरै Lazolvan समाधान थप्नुहोस्।
खनिज पानी कोटको साथ धेरै उपयोगी इनहेलेसन; बोर्जोमिकोट; - केवल वास्तविक पानी किन्नुहोस्, नक्कली होइन। मुख्य कुरा पानीबाट ग्याँस छोड्नु हो, अन्यथा केवल स्पार्कलिंग पानी यहाँ बेचिन्छ।
तपाईं अझै पनि समुद्री पानीको साथ इनहेलेसन गर्न सक्नुहुन्छ - तपाईंले समुद्रमा गर्मी बिदामा भएको जस्तो महसुस पनि गर्नुहुनेछ।
बच्चाहरूको लागि बहेको नाकको साथ, डाक्टरले खारा समाधान + नेप्थीजाइनको नाक मार्फत इनहेलेसन सिफारिस गर्छ। तपाईं अन्य ड्रपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर तेल होइन। जे भए पनि प्रयोग गर्नु अघि तपाईले आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ।
प्राय: जसो म सामान्य नुनको साथ इनहेलेसन गर्दछु। मँ ampoules मा नमकीन किन्छु (यो अधिक सुविधाजनक हो) र यसलाई औषधी ट्या into्कमा खन्याउँछु। तपाईं पक्कै आफैंमा खारा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ (प्रति १ लिटर पानीमा g ग्राम नुन), तर हामीसँग त्यस्तो नुन छ कि फोहोर तलछारबाट बाँकी रहन्छ। त्यसकारण, यो फार्मेसीमा बाँझो समाधान किन्नु मेरो लागि सजिलो छ। यसले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ (श्लेष्म झिल्लीमा कुनै माइक्रोप्रिसिपिटेट हुनेछैन), र उपकरण बिगार्ने छैन।
अर्को विकल्प भनेको ग्यास बिना खनिज पानी प्रयोग गर्नु हो। तर यो पर्याप्त छ मेरी छोरी र मेरो परिवारको लागि सामान्य नै नासाफ्यारेन्क्सको श्लेष्म झिल्लीलाई नुनिलो बनाएर।
अनुपात को रूप मा, म सामान्यतया समय लाई हेर्छु: प्रायः म मेरी छोरीलाई गर्छु। उनीलाई २ मिलि समाधान चाहिन्छ। यो लगभग minutes मिनेट इनहेलेसन हो (बच्चा2बर्षको छ)।
पहिले तपाइँलाई एक डाक्टर संग परामर्श आवश्यक छ - गर्न वा छैन
राम्रो छ भने दिनेछ - सोडियम क्लोराइड जस्तो सामान्य खारा आउनु पर्छ
मुख्य कुरा भनेको बहेको नाकलाई प्रगतिबाट जोगाउनु हो।
तपाईले प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ इन्टरफेरनतर कुनै कारणका लागि धेरैलाई यसमा एलर्जी हुन्छ।
त्यो त्यहाँ तपाईं एक नेबुलाइजरसँग ईन्सेलेसन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिस्क्रिप्शनमा नेबुलाइजरमा ईन्सेलेसन गर्न आवश्यक छ। जब हामीले छोरीको ब्रोन्काइटिस र नाकबाट बग्ने उपचार गर्‍यौं, डाक्टरले बिहान र साँझ २ जना इन्हेलेसन सिफारिस गरे सामान्य नुन (सोडियम क्लोराइड), जसमा हामीले धेरै थियौं ड्रप Lazolvan (निर्देशनहरूको अनुसार, बच्चाको उमेर अनुसार)।
तपाईं इनहेलरले भर्न सक्नुहुन्न यसको मतलब यो होईन - विभिन्न टिन्चरहरू, आवश्यक तेलहरू इत्यादि। यसले स्वास्थ्य र उपकरण दुबैलाई हानी गर्न सक्दछ।
म प्राय: डाइऑक्साइडिनलाई सालिनसँग मिसाउँछ समान अनुपातमा जब नाक बग्दै छ। कहिलेकाँही म इन्टरफेरनको साथ इनहेलेसन गर्दछु, थोरै सोडियम क्लोराइड पनि थपेको छ। यो यस्तो हुन्छ कि जब म नाकबाट नाक लाग्छ सुरू गर्दछु। र म पनि demineralized (जारी ग्यास संग) प्रकार कोटको पानी प्रयोग गर्दछ; र अन्य
म मेरो अनुभव साझा गर्दछु। मसँग सानो चिकित्सक र दुई साना बच्चाहरू - २ र years बर्षको कम्प्रेसर नेबुलाइजर छ, जो प्रायः बिरामी हुन्छ (जसको कारणले गर्दा, उनीहरूले घरलाई नेबुलाइजर जस्तो सहायक ल्याए)। यस नेबुलाइजरमा, विभिन्न मास्कहरूको बाहेक, नाक (बच्चाहरू र वयस्कहरू) को लागी नोजल हुन्छ। सम्पूर्ण परिवार को लागी सामान्य चिसो को उपचार को लागी, हामी प्रयोग गर्छौं डेकासन - दिनको १ पटक - वयस्क परिवारका सदस्यहरूको लागि २ मिलि र बच्चाको लागि १ मिलि, र सामान्य नुन समाधान - २ र १ मिलि क्रमशः - दिनको १ पटक। यो सबै डाक्टरको सल्लाहमा हो, कुनै ब्याग छैन। निर्देशनका अनुसार ड्यासन फ fun्गलसिडल, ब्याक्टेरिसाइडल र भाइरसिडल औषधि हो। यसले हामीलाई मद्दत गर्दछ।
न्युबलाइजरको प्रकार र ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ। मसँग एक सानो चिकित्सक कम्प्रेसर इनहेलर छ। यसमा केवल केही समाधानहरू खसाल्न अनुमति छ (सूची निर्देशनहरूमा छ)। ग्याग (सबै प्रकारका आवश्यक तेलहरूको थप सहित, हर्बल इन्फ्युसनले उपकरणलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। चिसोको उपचार गर्दा म केवल नुनको प्रयोग गर्दछु जुन कुनै पनि फार्मेसीमा बेचिन्छ। म अरू केहि पनि थप्दिन।
पोस्ट स्वास्थ्य र औषधि
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,310 प्रश्नहरू।